माननीयको होटलमा बालमजदुरदेखि वैदेशिक रोजगारीलाई बिचौलियामुक्त बनाउन खोज्दा पदमुक्त श्रममन्त्रीसम्म ।
१) बिचौलियालाई ‘क्रस’ गर्न खोज्दा अटाएनन् विष्ट
वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रणमा संस्थागत तथा कानुनी कदम चालेका गोकर्ण विष्ट मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा अटाएनन् । उनले सम्हालेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मा रामेश्वर राय यादवलाई दिइएको छ । शून्य लागतमा कामदार पठाउने गरी उनले गन्तव्य मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौता गरिरहेका थिए । यसबाट बेखुस व्यवसायीहरु विष्टविरुद्ध शक्तिकेन्द्र धाएको उनीहरु स्वयंले अप्रत्यक्ष रुपमा स्वीकारेका छन् । पढ्नुस् रविराज बरालको स्टोरी ।
२) के त्यो म्याच फिक्सिङ थियो ?
भुटानमा कुवेतविरुद्धको खेलमा नेपाली फुटबल टोलीको पहिलो रोजाइका स्ट्राइकरद्वय विमल घर्ती मगर र अञ्जन विष्टबिनै मैदान उत्रियो । उनीहरुसहित सन्तोष तामाङ र दिनेश राजवंशी टोलीमा परेनन् । बिदाइको दिन एक्कासि उनीहरुको नाम काटियो । एन्फाले उनीहरूमाथि अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गर्‍यो । कारण थियो– चारै जना खेलाडी २९ कात्तिक राती अबेरसम्म ठमेलको रेस्टुराँ चहार्दै मादक पदार्थ सेवन गरी मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेका थिए । अनुशासनको कारबाही भनिए पनि कतै त्यो म्याच फिक्सिङ त थिएन भन्ने शंका धेरैको छ । के यसमा सत्य छ ? पढ्नुस् पवन आचार्यको स्टोरी ।
३) केही फाइदा बालाई भयो होला, केही फाइदा संग्रौलालाई (शिशिर वैद्य)
खगेन्द्र संग्रौलाका धारिला शब्द, कटाक्षपर्ण तर्कले भरिएका लेखरचना चाख मानेर पढ्ने म सामान्य पाठक हुँ । सामाजिक सञ्जालतिर उनलाई कुण्ठाले भरिएको लेखक भनेर गरिने गाली पढ्दा बडो दु:ख लाग्थ्यो मलाई । तर त्यो कुण्ठा अनायास मेरा बामाथि पनि तेर्सिएकामा अचम्मित छु । मेरा बा बितिसके । संग्रौला आफैँले भनेका छन्– म उनीप्रति कृतज्ञ छु । बासँगको लामो संगतमा पक्कै पनि तीतामीठा घटना घटे होलान् । केही फाइदा बालाई भयो होला, केही फाइदा संग्रौलालाई । पढ्नुस् खगेन्द्र संग्रौलाको दाबीमा शिशिर वैद्यको प्रतिवाद ।
४) मित्र शिशिरलाई दुई प्रश्न (खगेन्द्र संग्रौला)
जब यो ठगी र कृतज्ञताको विरोधाभासी कथा रचिादै थियो, त्यो बेला मित्र शिशिर बालखै थिए । अहिले अविदित क्षेत्रमा प्रवेश गेरेर शब्दवाणले ब्ल्याङ फायर गर्न खोज्दा शब्दहरु बुमराङ भई उनीतिरै फर्केको देख्दा मलाई बडो नमज्जा लागेको छ । पढ्नुस् शिशिर वैद्यलाई दुई प्रश्नसहित खगेन्द्र संग्रौलाको लेख ।
५) महिला बन्छन् ट्रोलको सिकार
कसैलाई नियतवश चिढ्याउने गरी इन्टरनेटमा राखिएको आपत्तिजनक सन्देश ट्रोल हो । कसैलाई दुरुत्साहित गर्न वा बेइज्जत गर्न ट्रोल बनाउने गरिन्छ । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन । महिलालाई विषय बनाएर इन्टरनेटमा फैलिएका ट्रोलको शिकार नेपाली महिला पनि हुने गरेका छन् । तस्बिरमा ‘बोजु बजै’ को कार्यक्रमका सहभागीहरू । सुनिता लोहनीको स्टोरी विस्तृतमा पढ्नुस् ।
६) ५० करोडको कृषि अनुदानमा स्थानीय सरकारलाई ‘बाइपास’
ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्रबाट युवा पलायनलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्घोष गरिए पनि कृषिमा युवा कार्यक्रमलाई केन्द्र सरकारबाट बाहिर जान दिइएको छैन । कतिसम्म भने प्रदेश सरकार मातहत रहेका कृषि ५१ कृषि ज्ञान केन्द्र र स्थानीय तहमा रहेका कृषि शाखालाई कार्यक्रम सञ्चालनमा भूमिकाविहीन बनाइएको छ । व्यवसाय सञ्चालनका लागि सिफारिस दिने भूमिकामा खुम्च्याइएको छ, स्थानीय तहलाई । तस्बिरमा राजधानीको पुरानो नैकापमा गोलभेडाँ खेती स्याहार्दै किसान । यम बमको स्टोरी विस्तृतमा पढ्नुस् ।
७) माननीयकै होटलमा बाल श्रमिक
संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकमा राखिएको छ, जसअनुसार कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा काममा लगाउन पाइँदैन । तर मुगु जिल्लाबाट निर्वाचित नेकपा सांसद गोपाल बमले सञ्चालन गरेको होटलमा तीनजना बालबालिका काम गर्छन् ।तस्बिरमा नेकपाका सांसद गोपाल बमले रारा ताल छेउ खोलेको होटल डाँफेमा कामदार बालबालिका । शरद ओझाको स्टोरी विस्तृतमा पढ्नुस् ।